Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Xulka Ingiriisku waa soo Baxay (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Xulka Ingiriisku waa soo Baxay (dhegayso)
Oktoobar 6, 2017 12:35 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo isreebreebka koobka adduunka ee sannadka 2018, laguna qaban doono dalka Ruusha. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa xaqiijiyey in ay koobka adduunka u soo baxeen kaddib guul ay ka gaadheen xulka qaranka Slovenia.
Dhanka kala iibsiga ciyaartoyda, kooxka PSG ayaa doonaysa in ay iska iibiso ciyaaryahanka lagu magacaabo Edison Cavani si ay u hesho wakhti iyo maal ay kula soo wareegto Alexis Sanchez.
Waa mar kale iyo Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yameni oo ku sugan xarunta Daljir Bossaso. Yaa badiyey, yaa laga badiyey, maxaa se ka cusub naadiyada ciyaaraha adduunka? Halkan kaga bogo oo hoos ka dhegayso warbixintii koobnayd ee Yamani iyo Saaka & Xubintii Ciyaaraha!
Hoos ka dhegayso xubintii ciyaaraha oo faahfaahsan.
Saaka & Dunida iyo Maxamuud Cabdi Ibraahim, Daljir Bossaso (dhegayso)
Warka Arooryo iyo cXakiin Xuseen Xasan, Daljir Garoowe (dhegayso)